Wax soo saarka mashiinka weelka wax lagu nadiifiyo ee ugu horeeya ee Shiinaha
Sannadkii 1992, Bariga Fog waxaa loo aasaasay inay tahay shirkad tiknoolajiyad diiradda saarta horumarinta iyo soo saaridda mashiinka miisaska lagu mideeyo fiber-ka dhirta. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, Bariga Fog waxay si dhow ula shaqeysay hay'adaha cilmi-baarista sayniska iyo jaamacadaha hal-abuurnimada teknolojiyadda joogtada ah iyo casriyeynta. ...
Tiknoolajiyadda Bariga Dhexe ee Robot-ka ee cusub ayaa si weyn u kordhiya Awoodda Waxsoosaarka
Bariga fog & Geotegrity waxay diiradda saarayaan teknolojiyadda R & D iyo hal-abuurnimada, si isdaba joog ah u hagaajinta hababka wax soo saarka, soo bandhigida teknoolojiyada cusub ee wax soo saarka, iyo kordhinta awoodda wax soo saar ee qalabka wax lagu xardho ee saxarka la tuuri karo. Qalabka miiska wax lagu nadiifiyo ee Foornada Fog ee Fog Fog ayaa soo saari kara v ...
Bariga Fog Waxay Ka Qayb Galeysaa Bandhigga Shiinaha & FOODPACK Shiinaha ee Shanghai
QUANZHOU FAREAST EE ILAALINTA QALABKA CO.LTD waxay kaqeybgashay Bandhigga Shiinaha ee loo yaqaan 'PROPACK China & FOODPACK China' oo lagu qabtay Shanghai New International Exhibition Center (2020.11.25-2020.11.27). Maaddaama ku dhowaad adduunka oo dhan uu leeyahay mamnuuc caag ah, Shiinaha sidoo kale wuxuu mamnuuci doonaa miisaska la tuuro ee caagga ah tallaabo tallaabo. S ...
12 Qalabka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka loo dhoofiyo Hindiya Nofeembar 2020
by admin on 20-11-15
15-kii Nofeembar 2020, 12 nooc ayaa mashiinnada Baakadaha Cuntada isku-dhafan ee Kala-Badbaadinta Tamarta-Badbaadinta ah ayaa la buuxiyay oo loo raray u rarista Hindiya; 5 konteenar oo ay ka buuxaan 12sets saxarada wax taaj oo kale mashiinada waaweyn, 12 nooc oo wasakhahaasi wax soo saarka loogu talagalay suuqa Hindiya iyo 12 nooc h ...